सिधाकुरा जनतासँगः क्षयरोग नभएकालाई क्षयरोगको औषधी ? मन्त्रीले आफ्नै ड्राइभरलाई ठगे ! « News24 : Premium News Channel
सिधाकुरा जनतासँगः क्षयरोग नभएकालाई क्षयरोगको औषधी ? मन्त्रीले आफ्नै ड्राइभरलाई ठगे !
ल्याबको गल्ति ? क्षयरोग नभएकालाई क्षयरोगको औषधी ?
ललितपुरको एडी ल्याबले हुँदै नभएको रोग देखाएर बिरामीलाई थप समस्यामा पारेको छ । ललितपुरका ७० बर्षिय कृष्णलाल श्रेष्ठ बिरामी परेपछि ल्याब टेष्टका लागि स्थानिय इमाडोलको शुशिला फर्मामार्फत एडी ल्याबमा पुगेका थिए ।
एडी ल्याबले उनलाई क्षयरोगको संक्रमण देखाएपछि उनि भतmपुरको क्षयरोग उपचार केन्द्रमा पुगेर एडी ल्याबकै रिपोर्टका आधार औषधी चलाए ।
तर औषधीले कम हुनुको साटो उनको व्याथा झन बढेपछि क्षयरोग मापनको उच्च प्रबिधि जिन एस्र्पोट मार्फत पुन चेक गराए । तर त्यहाँ त उनलाई क्षयरोग नै नभएको रिपोर्ट आयो ।
त्यसपछि क्षयरोगको औषधी रोकेपछि बरु उनलाई कम भयो । पिडित पक्षले यस बारे ल्याबका सञ्चालक बिनोद कपारीलाई जानकारी गराए । तर उन्ले आफ्नो गल्ती मानेन्न ।
उन्ले आफ्नो गल्ती नमानेपछि हामीले कृष्णलालको स्मिएर पुनः टिचिंङ अस्पतालको माइक्रोबायोलोजी बिभागमा पुन चेक गरायौ ।
जसम क्षयरोगको मात्र ३ भन्दा बढि देखियो । तर एडी ल्याबको रिपोर्टमा भने ओकेजन्ली सिन देखिएको थियो । यसबाट ल्याबको गल्ती मात्र देखिदैन् विरामीको स्मिएर पनि साटेर ल्याएको स्वास प्रश्वास विशेषज्ञ डक्टर निरज बम बताउँछन् ।
बिशेषज्ञ डा बमका अनुसार एकै व्यक्तिको ल्याबको रिपोर्ट र स्लाईटको रिपोर्ट फरक देखिनुमा ल्याबकोे बदमासी भएको बताउँछन् ।
हामीले यसवारे ल्यावका सञ्चालक बिनोद कपारीलाई लानकारी गराएपछि उन्ले कष्णलालकी छोरी प्रविनालाई भेटी आफ्नो गल्ती भएको र आफु क्षतिपुर्ती भर्न तयार रहेको भन्दै यो विषयलाई टिभीमा नदेखाउन बताए ।
एडी ल्याब मात्र होईन यस्ता धेरै ल्याबहरु छन् जसले बिरामीको स्वास्थ्यसंग खेलबाड गरिरहेका छन् ।
मन्त्री खगेन्द्र प्रसाईले आफ्नै चालकलाई ठगेपछि !
हामीले कार्यक्रममा पटक पटक बिभिन्न वहानामा सर्वसाधारणलाई ठगी गरी भाग्ने व्यक्तिहरुको बिषयमा रिपोर्टीङ गर्दै आएका छौँ ।
विदेश लैजाने वाहाना देखि नेपालमा विभिन्न जागिर लगाइदिने आश्वासनमा विभिन्न व्यक्तिहरुले पैसा असुलेर फरार हुने गरेका छन् ।
१० बर्षसम्म साउदी अरेबीयमा पसिना बगाएर स्वेदश फर्किएका दुर्गा परियारले संयोगबश उनै मन्त्रीको गाडी चलाउने काम पाए ।
इही दौरानमा पुर्व मन्त्री प्रसाईले दुर्गालाई भएको पैसा जग्गामा लगानी गर्न लगाएर आफ्नै जग्गा दिने आशा देखाए ।